Xaaladda Caafimaad ee Ugaas Maxamed Duulane oo Laga Dayrinayo – Rasaasa News
Apr 27, 2012 Xaaladda Caafimaad ee Ugaas Maxamed Duulane oo Laga Dayrinayo
Jijiga, Apr 27, 2012 [ras] – Xaalada Caafimaad ee ugaas Maxamed Duulane oo aad looga dayrinayo, suurto galna tahay in xabsiga uu ku dhinto, hadii aan si deg deg ah xabisiga looga sii daynin.
War aan ka soo xiganay qaar ka mid ah ehelada Ugaas Maxamed Duulane oo xabsiga ku booqday, ayaa noo sheegay in xaalada caafimaad ee Ugaasku ay halis ku jirto.
Ugaaska oo ku jira tiro sideetanka wax dheer, ayaa hore u lahaa xanuunada ay da,adu keento, kuwaas oo intii uu xabsiga ku jiray uusan helin wax dawo ah, ayaa aad hoos ugu dhigtay xaaladiisa caafimaad iyo awoodiisaba.
Waxaana suurto gal ah in uu xabsiga ku dhinto maalmo gudahood, hadii aan isbadal deg deg ah ku iman xaalada uu haatan ku sugan yahay.
Ugaas Maxamuud Duulane ayaa xabsiga ku jira ku dhawaad shan bilood isaga oo aan wax maxkamad ah la hor keenin. Ma jiro wax urur siyaasadeed ah oo uu ku jiray Ugaas Maxamed Duulane, waxaa uu ahaa oday dhaqameed kaliya.
Waxaa dhawaan xabsiga jijiga ku dhintay Nadiir Maxamed Dhiidhi, oo ka mid ahaa maxaabiista ku xidhan xabsiga ee aan siyaasada u xidhnayn oo aan maxkamad lagayn.
Waxaa jira dad badan oo ku xidhan xabsiga Jijiga ee degaanka Somalida Ethiopia oo u xidhan shakhsiyaad awood ku leh degaanka. Xadhiga dadkaas lama socoto dawlada dhexe ee Ethiopia iyo hayyada xuquuqdu midna.
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa ka jirta nabad galiyo curdan ah oo aan dhamaystirnayn oo si sahal ah ay u dhaawici karaan khalad ka yimaad dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Roob Xoog Leh oo Wax Yeelay Shaykoosh iyo Birqod